7KW Vagadziri | China 7KW Vatengi & Fekitori
EV Wallbox Comercial Charger AC7KW ine Socket uye Cable Connector
7KW EV Imbajajajajajajajajajajajaji AC AC ine yakakwira 32A inobuda ikozvino, yakanyatsogadzirirwa kushandiswa kwakazvimiririra. Iine yakarongedzwa dhizaini uye yakaenzana saizi, inochengetedza nzvimbo uye iri nyore kushandisa, inova mhinduro yakanaka yeimba yako nekambani. Iyojaja yakakodzera kune ese emukati nekunze kunyorera, ine kudzivirira pane giredhi kusvika IP65. Iyo inotsigira kumadziro-kukwira kumisikidza pane pamwe nepasi -mira kumisikidzwa. Iine yakavakirwa-mukati WIFI module inotsigira OCPP kutaurirana p ...
EV Wallbox Commpecial Chaja AC7KW Inoenderana neEither Type 1 kana Type 2 tambo
Chigadzirwa Chigadzirwa 7KW yekushaja charger yakagadzirirwa kushandiswa kweruzhinji neRFID kusimbiswa. Yakashongedzerwa nemhando 2 yekuchaja socket, iyojaja inoenderana nechero mhando 1 kana mhando 2 tambo. Inoenderana nemaindasitiri zviyero, iyo yekutengesa ev charger inoshandisa MID yakasimbiswa mita kuti ive neshuwa uye yakavakirwa-muRCD kuchengetedza kuchengetedzeka. Chaja iyi inosanganisirawo 6mA DC yekudonha kubatika, iyo inobvisa kudiwa kwemutengo unodhura weRCD mhando B. Iyojaja inogona kubatanidzwa kune charg ...
EV Wallbox Pro-Smart Chaja AC7KW ine OCPP 1.6 & 2.0
ZvimiroCommercial kuchaja Management. Remote chengetedza chiteshi chako chekuchaja neOCPP Protocol. Kuongorora uye Kuzivisa. Tevera uye gadzirisa kushandiswa kwesimba. Zvehupfumi. Sarudza yako simba remitero uye rega iyo system iite otomatiki kunze yakachipa nguva yekuchaja yako EV. Zvimwe Zvinogadzikana PV VO yakakosha yakakwira pc zvinhu zvinogona kutakura kupwanya, kukanda uye imwe nharaunda ine hutsinye. OCPP yakazara basa Yedu yekuchaja murwi ine ocpp1.6-J yakazara mabasa, kusanganisira epakati mabasa. Kuchaja kwakanaka, ap ...